Kangakanani ezwekazini i-Nyakatfo Melika isihlobo kwezinye amazwekazi, inquma hhayi kuphela isimo sezulu, kodwa futhi labantu, isakhiwo kwezomnotho kanye lunye ukusatshalaliswa lembulunga yonke elinezinto ezinhlobonhlobo emkhandweni wensimbi. Amazwe insimu yalo, linothe kakhulu kwezokumbiwa ezihambelana ukuhwebelana phakathi kwamazwe.
Geography nesimo sezulu
Izwekazi i-Nyakatfo Melika wageza andle ezintathu: e-Arctic, Atlantic kanye Pacific. Ngayinye yalezi izilwandle, wo kambe uquqaba emoyeni akhiwa phezu kwalo, it has a ukubaluleka okukhulu ngenxa yesimo sezulu hhayi kuphela ezindaweni ezisogwini, kodwa futhi maphakathi nezwekazi.
Ezwekazini, kukhona amazwe amathathu ezinkulu - Canada, e-US nase eMexico. Kukhona inani elikhulu isiqhingi uthi nezindawo engaphansi USA. Canada iyona kakhulu iphuzu esenyakatho hhayi kuphela kuleli zwe kodwa lonke izwekazi. Sikhuluma iCape "IMpophoma". Kuyinto eNhlonhlweni Boothia ku-Canadian Arctic. Igama iCape yethiwa usosayensi Rene Murchison. Lo muntu wokuqala uhlole yonke le nhlonhlo.
Kangakanani ezwekazini i-Nyakatfo Melika ngokuhlobene nezinye, okwaholela umlando ukutholakala kwayo, incazelo, cwaningo nokuthuthukiswa okwalandela. Namuhla, ososayensi wanamathela umbono ukuthi ukuthi bangabavumbululi nezwekazi ka-Viking Group, baxoshwa ikamu labo e-Iceland.
Geological Imephu eNyakatho neMelika
Ososayensi uhlukanise nezwekazi ku ezintathu esifundeni ezinkulu Geological, imingcele zazo kakhulu uqondane imingcele yamazwe elise ensimini ka-mpumalanga yezwe.
Esokuqala futhi eminingi yasendulo ngokocwaningo sifundazwe itholakala e-Canada. Yini kubizwa ngokuthini? Lokhu "Isihlangu Canadian", etholakala enyakatho kakhulu zaleli zwekazi. Yena lakhiwa kwenkathi lasendulo Precambrian, okuyinto abathintekayo ukwehluka Geological ala mazwe. Kangakanani ezwekazini i-Nyakatfo Melika ngokuhlobene nezinye, ngenxa, kuhlanganise, futhi ikakhulukazi lasungulwa ezikhathini zasendulo.
Ngenxa lesi sici Geological, Canada ingenye emazweni ahlukahlukene ngokuya izidubedube. On endaweni uthi Arctic ezifakwa ezinkulu nickel, igolide, okuhola molybdenum, futhi, okubaluleke kakhulu, i-uranium. A ezindaweni ayesanda kutholakala Arctic, imali idayimane ukwenza izwe omunye abahlinzeki elikhulu izinto zokusetshenziswa emakethe ngamazwe.
Isici esibalulekile kuba phambi komhlaba Canadian Sadberiyskogo ore umcengezi endaweni esiFundazweni Ontario, kwakheka ngenxa negalelo meteorite surface eMhlabeni. Le ndawo unothile kakhulu metal imikhando, okuyinto kudala anomaly eziluzungezile, okwakubizwa ngokuthi i anomalies kazibuthe Temagami.
Isifundazwe Geological e-United States efana Canadian. Okukhishwayo kuphela esishintshashintshayo ezingasadingeki, okusikhumbuza meteorite asemigodini.
Kangakanani ezwekazini i-Nyakatfo Melika ngokuhlobene nezinye kulula ukunquma ngokubheka ibalazwe. Uma kusuka umakhelwane walo entshonalanga - Eurasia - America ahlukaniswe isihlobo emincane iBering Strait, umakhelwane kusukela eningizimu, it is hhayi ahlukaniswe nhlobo, ngaphandle man-made iPanama Canal.
Central American uthi awunayo ezingeni lelisetulu ukuthuthukiswa komnotho, futhi ngenxa yalokho kakhulu sengozini imiphumela emibi nezinhlekelele zemvelo eziye ngokuvamile zenzeka esifundeni.
Phakathi izinhlekelele ezivamile yemvelo kufanele bakhombise iziphepho kwakhiwa phezu Atlantic futhi zithuthele entshonalanga naseningizimu. Ngaphansi umthelela wabo nakanjani iwe njengoba ugu US uthi futhi amazwe ayiziqhingi ase iMelika Ephakathi.
umsebenzi zokuzamazama komhlaba
Eyesibili isici esibalulekile saleso sakhiwo zaleli zwekazi inqwaba nezinezimo ukugadlwa ukuzamazama komhlaba asebenzayo, futhi umphumela waba ukuthi nezwekazi kwenzeke ukuzamazama komhlaba okwadala umonakalo wahlupheka izinkulungwane zabantu emazweni asathuthuka zaseCaribbean.
Okubaluleke kakhulu zonke ukuzamazama komhlaba kwenzeka e-United States, kwaba Elikhulu Earthquake Alaskan ukuthi senzeka ngo-March 1964. Kwaba ezadala umonakalo ngo-nemiphumela yako inhlekelele yemvelo, imiphumela okuyinto yezwakala endaweni eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu square amakhilomitha. angaphezu nje ukundindizela zalandelwa kwenhlabathi eziningi, mudflows nokudilika kwenhlabathi, agqagqene imigwaqo esezintabeni zivimbele ukudlula imishini wokutakula ukuze izindawo lapho-ke kwakudingekile ngakho.
Futhi, indlela ezwekazini i-Nyakatfo Melika, inikeza uthi nezwekazi sobala sethubeni elihle ebuhlotsheni nomakhelwane kwezilwandle.
Kuyini zamalahle, futhi bayini?
Inhloko-dolobha ye eRepublic. Imephu Chuvashia
Indzaba-agumenti ku "Self-imfundo": uhlelo kanye nezincomo
I-cleaver ehamba phambili ibonisa ubuciko kanye nomdwebo ongenakubukeka
Ukwakha ihholo elincane - isikhala ekulondolozeni
Izingane ezisafunda amabanga aphansi vozrasta.Obschaya isici ubudala wasesikoleni samabanga aphansi kafushane (Psychology)
9 izinto ezixakile ukuthi zingathengwa China
Aleksandr Mihaylovich Gerasimov, umculi izithombe, biography